Rute 1 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Ke kaloku kwathi ngemihla abagwebi+ babesenza okusesikweni kwabakho indlala+ elizweni, kwaye indoda yasuka eBhetelehem+ yelakwaYuda yaya kuhlala njengomphambukeli kumhlaba wakwaMowabhi,+ yona nomfazi wayo noonyana bayo ababini. 2 Kwaye igama lendoda yayinguElimeleki, igama lomfazi wayo inguNahomi, namagama oonyana bayo ababini inguMahalon noKiliyon, amaEfrata+ aseBhetelehem yelakwaYuda. Ekugqibeleni bafika kumhlaba wakwaMowabhi baza baqhubeka belapho. 3 Ekuhambeni kwexesha uElimeleki indoda kaNahomi wafa, kangangokuba wasala noonyana bakhe ababini. 4 Kamva la madoda azithabathela abafazi, abafazi bakwaMowabhi.+ Igama lomnye yayinguOrpa, yaye igama lomnye linguRute.+ Kwaye baqhubeka behleli apho iminyaka elishumi. 5 Ekuhambeni kwexesha bobabini, uMahalon noKiliyon, bafa nabo, kangangokuba loo mfazi wasala engenabo abantwana bakhe ababini nendoda yakhe. 6 Yaye wasuka noomolokazana bakhe wabuya kumhlaba wakwaMowabhi, kuba wayevile emhlabeni wakwaMowabhi ukuba uYehova wayephethulele ingqalelo yakhe ebantwini bakhe+ ngokubanika isonka.+ 7 Waphuma kwindawo awayeqhubeke ekuyo,+ bekunye naye oomolokazana bakhe bobabini, yaye baqhubeka behamba endleleni ukubuyela kwilizwe lakwaYuda. 8 Ekugqibeleni uNahomi wathi kubo bobabini oomolokazana bakhe: “Hambani, buyelani, ngamnye kwindlu kanina. Wanga uYehova anganenzela ububele bothando,+ kanye njengoko niye nabenza kula madoda afileyo ngoku nakum.+ 9 Wanga uYehova anganinika isipho,+ nize nifumane indawo yokuphumla+ ngamnye kwindlu yendoda yakhe.” Waza wabanga,+ yaye baphakamisa amazwi abo balila. 10 Kwaye baqhubeka besithi kuye: “Hayi, siza kubuyela nawe ebantwini bakowenu.”+ 11 Kodwa uNahomi wathi: “Buyelani, zintombi zam. Kutheni nifanele nihambe nam? Ndisenabo na oonyana ezibilinini zam, yaye ngaba baya kuba ngamadoda enu na?+ 12 Buyelani, zintombi zam, hambani, kuba ndimdala kakhulu ukuba ndingaba nendoda. Ukuba bendithe ndinethemba nokuba ngokuqinisekileyo bendiza kuba ngowendoda ngobu busuku nokuba ngokuqinisekileyo bendiza kuzala oonyana,+ 13 beniza kubalinda na de bakhule? Beniza kuhlala nizigcinele bona ningabi namadoda? Hayi, zintombi zam, kuba kukrakra kakhulu kum ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphume nxamnye nam.”+ 14 Akutsho baphakamisa amazwi abo baza balila ngakumbi, emva koko uOrpa wamanga uninazala. Ke yena uRute, wanamathela kuye.+ 15 Ngoko wathi: “Khangela! Umninawakazi wakho ongumhlolokazi ubuyele ebantwini bakowabo nakoothixo bakhe.+ Buyela nomninawakazi wakho ongumhlolokazi.”+ 16 Yaye uRute wathi: “Musa ukundibongoza ukuba ndikushiye, ndijike ekukuphelekeni; kuba apho uya khona ndiya kuya, nalapho uchitha ubusuku khona ndiya kuchitha ubusuku.+ Abantu bakowenu baya kuba ngabantu basekhaya,+ noThixo wakho abe nguThixo wam.+ 17 Apho ufela khona ndiya kufela khona,+ ndingcwatyelwe khona. Wanga uYehova angenjenjalo kum aze ongeze+ kuko ukuba kungabikho nantoni na enokusahlula ngaphandle kokufa.” 18 Akubona ukuba uyazingisa ufuna ukuhamba naye,+ wandula ke wayeka ukuthetha naye. 19 Kwaye bobabini bahamba de baya kufika eBhetelehem.+ Kwathi kamsinya bakufika eBhetelehem, saxokozela sonke isixeko ngenxa yabo,+ yaye abafazi baqhubeka besithi: “NguNahomi lo?”+ 20 Kwaye wayesithi kwabo bafazi: “Musani ukundibiza ngokuba ndinguNahomi. Ndibizeni ngokuba ndinguMara, kuba uSomandla+ wenze ukuba kube krakra kakhulu kum.+ 21 Ndandizele ukuhamba kwam,+ yaye uYehova undibuyise ndilambatha.+ Kutheni nandibiza ngokuthi Nahomi, ekubeni inguYehova ondithobileyo+ kwaye inguSomandla ondibangele intlekele?”+ 22 Ngaloo ndlela uNahomi wabuya, uRute umfazi womMowabhi, umolokazana wakhe, ekunye naye ekubuyeni kwakhe kumhlaba wakwaMowabhi;+ yaye bafika eBhetelehem+ ekuqalisweni kokuvunwa kwerhasi.+